नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो चाड विजयादशमी आज, काठ्माण्डौ सुनसान « Surya Khabar
नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो चाड विजयादशमी आज, काठ्माण्डौ सुनसान
काठमाडौँ । आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजयादशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसादस्वरुप टीका, जमरा थापी मनाइँदैछ । यसै चाड मनाउनकालागी बाहिर जाने नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुका कारण काठ्माण्डौ सुनसान भएको छ । सडकहरुमा फाट्टफुट्ट प्राईभेट गाडाीहरु बाहेक चलेका छैनन् । झण्डै ३० लाख बाहिरिएको समाचार आएको छ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज देवी विसर्जनको साइत बिहान ८ बजेर २५ मिनेटमा रहेको जनाएको छ । टीका प्रसाद ग्रहण गर्न साइत खोज्नेका लागि भने ८ बजेर ४५ मिनेटको साइत उत्तम रहेको अध्यक्ष एवम् धर्मशास्त्रविद् प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले बताए ।